IObit Unlocker - isicelo khulula evumela ukuthi wena ukuvula ifoni yakho ukuba abashukumise futhi ukhiphe amafayela namafolda. Ngaphezu kwalokho, ithuluzi ikuvumela ukuba enze batch kokuphothulwa izinqubo ezithinta ukufinyelela amafayela. I interface ulula futhi has a translation Russian.
Abantu abaningi babhekana nesimo lapho ifayela noma ifolda is hhayi indaba obufuna ukuyigcina isusiwe. Lolu hlelo lokusebenza kungasiza umsebenzisi ukuqeda amafayela engenamsebenzi namafolda kukhiyiwe ngenxa yezizathu ezahlukene.
kanjani lesi simiso siyasebenza?
Ifayela ukufakwa esinikezwa ukufaka ezihlukahlukene izinhlelo ezifana Amigo isiphequluli, okuyinto has izibuyekezo exubile. Ngakho-ke kubalulekile ukuba banake yonke inqubo yokufaka, ngesikhathi ukususa uphawu, noma download kusuka site omethembayo, ngaphandle izithasiselo.
Ngemva kokufaka, ifasitela izovela lapho ungakwazi ukwengeza amafayela namafolda ukuze uvule. Run it, ungakwazi umane Ukuhudula bese uphonsa usebenzisa Windows Explorer noma ngokusebenzisa esibonakalayo ukhiye. Ukusebenzisa okukhethwa kukho omncane ukuba ukhethe amafayela amaningi, kumele ubambe CTRL asemqoka.
Emva kwalokho, iwindi Umbuso indawo sehlukaniswe izingxenye ezimbili. Phezulu sizobonisa
amafayela namafolda, okuyinto balinde alunge kanye nesimo sabo. Ngezansi ubonisa izinqubo ukuvimba ukufinyelela amafayela. In the maphakathi iwindi "Vula" inkinobho, ngokuchofoza lapho ungakwazi ukususa inkinga, luvimbe ukufinyelela.
Lenkinobho iseduze unxantathu ngokuchofoza ngalo ungabeka Umbuso ukususa, ukuthutha, qamba kabusha noma ukukopisha into.
I Umbuso ikuvumela ukuba uvule ukufinyelela amafayela namafolda. Isicelo ibonisa isimo into ngayinye. Uhlelo has a batch processing umsebenzi. Ngaphezu kwalokho, lo Umbuso indawo linamathele Windows Explorer.
I ngebuhle nebubi
Kuyaphawuleka ukuthi lolu hlelo luyasebenza ngaphandle amaphutha. Ngaphezu kwalokho, i-interface elula olimini lwesiNgisi, okuyinto eyenza ukusebenza nalo abasebenzisi abangenalwazi. Phakathi izici ezingezinhle bungabonakala iqiniso lokuthi isicelo akusho ukubonisa ukwaziswa mayelana nezinkinga kungenzeka khipha lwamafayela system.
Ngokuvamile, isicelo ingasetshenziswa hhayi kuphela ukuvula ukufinyelela amafayela namafolda, kodwa futhi basize abasebenzisi ukuphatha ngokugcwele idatha phakathi ukwelashwa opertsionki igciwane.
Ukuvula ifayela kwenye insiza nge uphawu Proxy
Windows Tablet umelana kakhulu emakhazeni ashubisa umnkantsha
Isiphuzo kwaduma Angry Birds Pepsi and Coca-Cola
Dell akazange adikibale Windows RT